dwg - maGeofumadas
"kwakaita nzvimbo yacho
Isa peperesheti muAccCAD, iyo inongororwa patsva
Kunyangwe isu tichigona kusvika padanho, zvichiratidza kuti Hofisi Yekunze mudziyo chishandiso chinogona kubatanidzwa nespredishiti yeExcel kana faira reIzwi, uye kuti izvi zvinogadziridzwa zvine simba sekugadziriswa kweiyo faira yekutanga, nhoroondo sezvo nhoroondo Brendan Haggerty iri fomu rangu ...
dwg Office kuti zvinouraya
Webinar: 5 yakanakisisa zvinhu zvaungaita pamwe CAD Software
Fungidzira kuti iwe une seti yezvirongwa makumi mana neshanu, nemabhokisi kana mamodule muLayout anotakura ruzivo rwakanangana netafura muMicrosoft Office, senge jira nhamba, uyo akabvumidza, zuva rekubvumidzwa, nezvimwe. Uye iwe unofanirwa kuisa shanduko kune ese iwo ndege pasina kuvhura imwe neumwe, uchingo chinja iyo data mu ...
BIM - iyo isingachinjiki maitiro eCAD
Mune yedu Geo-Injiniya mamiriro, izwi rekuti BIM (Kuvaka Ruzivo Modeling) haisisiri yenhau, iyo inobvumidza dzakasiyana-chaicho-hupenyu zvinhu kuti zvifananidzirwe, kwete chete mune yavo graphic inomiririra asiwo mune avo akasiyana ehupenyu kutenderera matanho. . Zvinoreva kuti mugwagwa, bhiriji, vharafu, canal, chivakwa, ...
AutoDesk Bentley Systems DGN dwg Ini-muenzaniso
AutoCAD-AutoDesk, Featured, Geospatial - GIS, Microstation-Bentley, My geofumadas
AutoCAD 2016. Kuguma nokusingaperi marezinesi.
Sechimiro chechisikigo cheiyi yepasi rose, yakabatana uye ingangoita isingafungidzike shanduko, software haisisiri chigadzirwa chemabhokisi uye inova sevhisi. AutoDesk haisi iyo yega yatiri kutoona neAdobe, Bentley Systems, Corel, kutumidza mashoma. AutoDesk yazivisa kuti gore rino 2015 ichave yekupedzisira ...
Spatial varipo Manager nokuda Bricscad
Nomufaro mukuru tinoona kuti rave akapa wokutanga shanduro Spatial Manager nokuda Bricscad, saka vanokwanisa ikozvino kushandisa GIS purogiramu ari rweruzhinji CAD software.
AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, kuororwa
Spatial Manager: Tingachengetedza spatial Data zvakanyanya, kunyange kubva AutoCAD
Spatial Manager ndeyekushandisa kwe spatial data management, iyo inoshanda yakazvimirira. Iyo ine zvakare plugin iyo inopa geospatial kugona ku AutoCAD.
AutoCAD 2015 AutoCAD Mepu DGN dwg Kml My First Impression QGIS Shp
AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS
Nongedzera makore uye kuwiriranisa neGoogle Mepu - Microstation V5i 8 Chii Chitsva
Iko mukana wekupindirana neGoogle Mepu neGoogle Earth uye kubata kwedata kubva kuma scanner ndizvo zvimwe zvekukurumidza tarisiro yeiyo GIS - CAD system. In izvi zvinhu, hapana kukahadzika kuti software yepachena yakafambira mberi nokukurumidza kupfuura proprietary software. Parizvino ndiri kuongorora kwechipiri kugadzirisa ...
Sync Microstation neGoogle Earth
Google Earth rava chinhu anenge sarambidzika kushandisa edu iyezvino Mapping pezvakaitwa. Kunyangwe iine painogumira uye nemhedzisiro yekureruka kwayo, zvakawanda zvinokanganiswa zvinotaurwa zuva rega rega, kune chishandiso ichi isu tinofanirwa kuti geolocation uye kufamba pamamepu kwakakurumbira nhasi ... saka isu tine ...
DGN dwg Kml
Cadastre, Google pasi / mamapu, Microstation-Bentley
Free paIndaneti convert nokuda GIS Data - CAD uye Raster
MyGeodata Converter ndeyeInternet sevhisi iyo inofambisa kutendeuka kwedata pakati pemafomati akasiyana. Parizvino sevhisi inoziva makumi maviri nemaviri mafomati ekuisa: ESRI Shapefile Arc / Info Binary Coverage Arc / Info .E22 (ASCII) Microstation DGN Coverage (Shanduro 00) MapInfo Faira Comma Yakaparadzaniswa Kukosha (.csv) GML GPX KML GeoJSON UK .NTF SDTS Kuverenga kwevanhu kweUS ...
DGN dwg Shp
Template chokusika DXF faira kubva Excel mazita pfungwa
Munguva pfupi yapfuura Juan Manuel Anguita akandipa iyo nyowani vhezheni iyi yekushandisa iyo yatakange tasimudzira kare, asi nguva iyoyo yanga yasara nemamwe matambudziko neshanduro nyowani yeExcel. Kushandiswa kwaro kuri nyore, asi kunoshanda zvakanyanya. Iwe unofanirwa kuisa huwandu hwenongedzo, batanidza x, y, z; Ndaisa ...
AutoCAD-AutoDesk, Downloads, topografia
Bentley ProjectWise, chinhu chokutanga chaunofanira kuziva
Chigadzirwa cheBentley chinonyanya kuzivikanwa Microstation, uye ayo akamira akasiyana ematavi akasiyana e geo-engineering nekusimbisa dhizaini kune ese ehurumende, maindasitiri, ekuvaka uye ekufambisa enjiniya. ProjectWise ndiyo yechipiri Bentley chigadzirwa chinosanganisa manejimendi manejimendi uye basa reboka kusangana. uye ichangobva kuburitswa ...
Bentley Systems DGN dwg Ini-muenzaniso
Engineering, Microstation-Bentley, kuororwa
View uye exchange dwg mafaira mushanduro dzakasiyana pamusoro AutoCAD
Kazhinji, pavanotitumira faira re dwg panowanzo kuve nedambudziko nekuda kweshanduro yavakachengetedzwa nayo. Hedzino dzimwe nzira dzekugadzirisa dambudziko iri: Ndeipi vhezheni ye dwg Izvi hazvigoneke kuzivikanwa, sezvo iyo faira ichingova ne .dwg kana .dxf yekuwedzera asi hazvizivikanwe kudzamara taedza kuivhura.
Chii New muna AutoCAD, ArcGIS uye Global Mapper
ArcGIS Plugin yeAutoCAD ESRI yakaburitsa chishandiso chekuona data reArcGIS kubva kuAutoCAD, iyo yakarembera seye nyowani tebhu paRibbon uye isingade rezenisi reArcGIS kana chirongwa chakaiswa. Inoshanda neshanduro AutoCAD 2010 kuenda AutoCAD 2012, ivo havana kana chavakataura nezve AutoCAD ...
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Innovations
Shandura DGN file kubva ED50 kusvika ETRS89
Vashandisi veGIS vanowanzo rwirwa shanduko yeCAD dhata uye mareferensi masystem. Isu tinoti kupokana nekuti, muzviitiko zvakawanda, shanduko iyi inosanganisira basa rehunyanzvi iro rinozotibvumidza kuchengetedza ruzivo rwakawanda sezvinobvira kubva ku data rekutanga. Izvo zvinoda kuziva kuti kuita uku kunouya neMicrostation, asi zvirokwazvo kune avo ...
Geospatial - GIS, Microstation-Bentley
AutoCAD 3D course pamusuo wako, nokuda kwe $ 34.99
Iyi ndiyo Yekukurumidza Nhungamiro Kosi, iyo inogona ikozvino kutengwa nekutambirwa pamusuwo wemba nemutengo weUS $ 34.99. Chigadzirwa chacho chinosanganisira: Yakazara kosi yeAutoCAD 2D uye 3D ine 477 mavhidhiyo Yakareruka browser kuti ubvunze misoro Yese iyo kosi muenzaniso mafaira mafaera 17,000 dwg ...
AutoCAD-AutoDesk, Kudzidzisa CAD / GIS
Kudzidza AutoCAD Kuona
Nhasi kune akati wandei emahara maAutoCAD makosi paInternet, neizvi isu hatisi kutarisira kuteedzera kuedza kwatoitwa nevamwe, asi kuti tikwanise mupiro unopa chipingamupinyi pakati penzira iyo inotsanangura mirairo yese uye chokwadi chemushandisi aimboziva mirairo haizive pekutangira. ...
AutoCAD-AutoDesk, Kudzidzisa CAD / GIS, Video
2 Kubudirira mune geospatial nzvimbo kuti zvisingagoni kufuratirwa
Gore rakatanga nesimba guru nemakambani akatsaurirwa kunzvimbo yekudzidzira, tinotora mukana wechinyorwa ichi kusimudzira zvimwe zvitsva zviripo mune iyi nyaya, uye sezvinei tinopa kuenderera kune chigadzirwa, chemutsara wange tichitaura kubvira gore rapera; iyo mukufunga kwedu yakasarudzika ...
Kudzidzisa CAD / GIS, Geospatial - GIS, Innovations
Nzira yekugadzira dombo mu Microstation (Cell)
MuMicrostation mabhuroko anonzi maSero (masero) kunyangwe mune mamwe mamiriro ndakanzwa kuti anonziwo masero. Muchikamu chino tichaona maitirwo azvo uye pfungwa dzinovaita kuti vasiyane nemabhuroka eAutoCAD. 1. Ndeapi maseru anoshandiswa? Kusiyana neGIS, uko iko kufananidzira kune simba kubva ...
AutoCAD-AutoDesk, Cadastre, Microstation-Bentley
peji 1 peji 2 peji 3 ... peji 6 peji Next
zvoseMakosi - 3D ModelingMakosi - BIM MEPMakosi - BIM KushandaMakosi - BIM ChimiroMakosi - CivilWorksMakosi - GeospatialMakosi - LandWorksMakosi - Chigadzirwa Lifecycle
Structural Dhizaini Kosi uchishandisa AutoDesk Robhoti Chimiro
Yakazara inotungamira kushandiswa kweRobot Structural Analysis yemuenzaniso, kuverenga uye kugadzirwa kweyekongiri uye nesimbi zvivakwa ...
Ona zvimwe ...
Geographic Ruzivo Systems Kosi neQGIS
Dzidza kushandisa QGIS kuburikidza nemitambo inoshanda Geographic Information Systems uchishandisa QGIS. -Zvese zvekurovedzera zvaunogona ...
Yepamberi Simbi Dhizaini
Dzidza dhizaini yekushandisa uchishandisa Advanced Steel Design software. Dhizaina yakakwana Simba chivakwa, rakarongeka makoramu Mapuranga, madhitimendi Kurongwa ...
Real-time traffic yepaiti ino
Dzidza nezve Synthetic Aperture Radar (SAR) nemienzaniso
Chii chinonzi geography?
Vhura geospatial zviyero
Chii chiri ivhu sampuli daro?
3D Civil Specialization - Ona gare gare
Maawa makumi matatu nemaviri evhidhiyo - 32% pamhepo
Dzidza ArcGIS Pro - Nyore
Mumutauro wako - 100% online